Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo Kumanaan Ay Qashinka u Hoydaan ayay Somali sii Daba Fadhidaa – Daawo
Gabadha lagu magacaabo Caroline Knowles, oo dalxiis u tagtay Adisababa ayaa kusoo argatya wax ay ku tilmaantay in aanany abidkeed arkin. Waxay tidhi;
Markii ugu horeysay waxaan ka arkay wadada Highway-ga ah meesha la dhaho Koshe oo ah qashin-qubka Adisababa 50kii sanee lasoo dhaafay. Waxay ku dherersantahay wadada inta ay ishaadu qabato; meel dhiiqa ah oo madow oo dhulka ka kacsan oo qashin qudhmay ood marmar arki midab yarehe furan.
Wiilkii tarjumaada aan kula heshiiyay oo ahaa arday jaamacadda Adisababa wax ka dhigta ma jeclayn inuu udhaafo halkaan taagnayn. Taksigii ayaan ka dagay waxaan ka gudbay boondadii, waxaanan isku dayay inaan isha ka buuxsado sawirka cajiibka ah ee ii muuqda.
Haad ayaa hawada ka ilaalinaya 36ka Hektaar ee qashin-qubka ah oo magaalada ay hadda soo cidhiidhinayso. Sidoo kale eeyo madmadow ayaa dhex socda oo boobaya waxay helaan. Qiiq ayaa meela kala duwan ka baxaya, sidoo kale buldoosaro ayaa kor usii wada qashinka, gawaadhi ayaana qashinka kusoo daldalaya.
Ayda, iyo haadka iyo qalabkaa waxaa dhex socday wax kale oo markaan u sii dhawaaday aan si fiican u arkay. 200 – 300 oo dhar waskhaysan oo sida qashinka u jeexjeexan xidhan ayaa ku foorara qashinka oo biro hangool ah ku fadhaya qashinka.
Anigoo aad u yaaban ayaan kasii daadagay boondadii saan u gaadho qashin-qubka, waxaanan sii dhaafay 3ex nin oo iyagana xog iyo baadhitaan waday. Wadahadal aanan fahmin ayaa na dhexmaray oy igaga qaadeen kaamiradii iyo shandadii garabka iyo cod-doobi digital-ah, sidaa ayaa la’iigu fasaxay in aan sii dhaafo.
Maqaalka aad ayuu u dheeryahay waxayna gabadha qortay ka sheekaynaysaa in qashin-qubka Koshi oo macnaha loola jeedo yahay-Wasakh- (which means ‘dirty’ in Amharic) uuna la mid ahayn qashinada dalalka Yurub oo alaab dib loo hagaajin karo (Re-cycling) lagala soo dhex baxo. Qashin-qubka Koshi dadka dhex socda waa dad ku nool qashinkaa oo raashinka qudhmay kala soo dhex baxa halkaa.
Qofka Somaliga ah ee daawada siwarada laga soo qaaday kumanaankan Itobiyaanka ah ee noloshooda usoo doonta Koshi iyo filimadan hoose wuxuu la yaabi kuwa odhanaya Itobiya ayaa horumar na gaadhsiisay ama qaranimadoodii u daba fadhiya Itobiya.
Adoonka master-kiisa waa u master. Daawo: